ओलीले फाले अर्को तुरुपको पत्ता, फेरि संसद ब्युँतिने पक्का भएपछी माधव नेपालसँग एकता ! - News20 Media
June 2, 2021 N20LeaveaComment on ओलीले फाले अर्को तुरुपको पत्ता, फेरि संसद ब्युँतिने पक्का भएपछी माधव नेपालसँग एकता !
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिन्छन् । पछिल्लो पटक उनले आफ्नै पार्टीको माधव समूहका नेताहरुलाई हित र नियमविपरित काम गरेको भन्दै कारवाही गर्दै पार्टीबाट निस्कासन गरेका थिए । तर, विस्तारै उनी नरम देखिएका छन् । उनले फरि अर्को चाल चल्ने तयारी गरेका छन् । आन्तरिक विवादमा रुमलिएको नेकपा एमालेले देशको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ ।
भित्र विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय भएका बेला अध्यक्ष केपी ओली नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी ससर्त ब्युँताउन तयार भएका छन्। माधव नेपाल समूहले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिए नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी ब्युँताई पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएको घोषणा गर्न ओली सहमत भएको एमाले उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्धाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने भएपछि ओलीले अर्को जालसाजी गरेको पत्रकार खेम भण्डारीले टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘केपी ओलीको अर्को जालसाँजी : संसद फेरि ब्युतने पक्का जस्तै देखिएपछी एकताको नाटक !!’